प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी कि ज्यालादारी ? - Netizen Nepal
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी कि ज्यालादारी ?
in अन्य, गतिविधि, बजार, मुख्य समचार, वर्गीकृत, विकास / निर्माण, समसामयिक
बलेवा, ११ माघ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँगाउँमा बेरोजगार युवाहरुलाई १०० दिने रोजगारी कार्यक्रम सुरु भएको छ । फुर्सद नै फुर्सदमा दिन कटाउन बाध्य युवाहरुको मुहारमा खुसी झल्किएको छ भने परिवारको गुजारा टार्नसमेत सजिलो भएको छ । वेरोजगार युवाहरुले रोजगारी त पाए तर यससंगै तिन महिनापछि ति युवाहरुले के गर्ने भन्ने प्रश्न समेत खडा हुन्छ । १०० दिन बितेपछि उनीहरु कि त पहिलेको जस्तै बिनाकाम बस्ने, कि भने विदेशका लागी प्रक्रिया अगाडी बढाउनेबाहेक अन्य विकल्प रहदैन । त्यसैले सरकारले दिगो रुपमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जानकारहरु जोड दिन्छन।